Amisom oo ka hadashay Wararka Sheegaya Geerida Hogaamiyaha Al-Shabaab | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Amisom oo ka hadashay Wararka Sheegaya Geerida Hogaamiyaha Al-Shabaab
Taliyaha ciidamada midawga Africa ee Soomaaliya jooga General Silas Ntigurirwa oo koox wariyaal ah kula hadlay magaalada Bujunbura ee caasimada wadanka Burundi ayaa waxaa uu sheegay in haddii ay rumowdo geerida hogaamiyaha Al-Shabab Axmed Cabdi Godane in guul iyo farxad ay u tahay dadka ku nool guud ahaan qaaradda Africa sida uu yiri.
General Silas Ntigurirwa waxaa uu sheegay in inkastoo ay socoto xaqiijinta in Axmed Godane uu ku geeriyooday duqeyntii todobaadkaan ka dhacday gobolka Sh/hoose hadda haddii ay dhabowdo ay farxad iyo reyn reyn wax uu ku tilmaamay u tahay dadka Africa oo dhan ku nool.
“Haddii ay run noqonto in hogaamiyaha Al-Shabab la dilay waa war farxad iyo guul u ah dadka qaaradaan ku nool waana u dabaaldagi doonaa” ayuu yiri General Silas Ntigurirwa taliyaha ugu sareeya ciidamada AMISOM.
Wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa ilo wareedyo ay ka heshay taliska ciidamada AMISOM ayaa sheegtay in hogaamiyaha Al-Shabab ay u badan tahay inuu geeriyooday.
Dhanka kale taliyaha AMISOM waxaa uu sheegay inuu socdo howlgal adag oo ay ku doonayaan inay Al-Shabab kaga qabsadaan magaalada Baraawe oo xilligaan xarun muhiim ah Al-Shabab.
“Qabsashadeena magaalada dekeda leh ee Baraawe waa ay dhawdahay oo waxay dhici doontaa xilli aad u dhow” ayuu sidoo kale yiri taliyaha ugu sareeya ciidamada AMISOM.
Maraykanka oo duqeyntii Sh/hoose geystay willi waa uu ka gaabsanayaa inuu si cad ugu dhawaaqo inuu dilay Axmed Godane oo ah shaqsiga Al-Shabab ugu sareeya sidoo kalena dawlada Soomaaliya ayaa iyana ka gaabsatay.
Xarakadda Al-Shabab nafsad ahaanteeda si cad ugama aysan hadlin wararkaan warbaahintoodana sooma aysan hadal qaadin wararka ku saabsan weerarka Sh/hoose ka dhacay.